उमेर बढेसँगै किन कमजोर हुँदै जान्छन् हड्डी ? के हो ओस्टियोपोरोसिस ? कसरी बच्ने ? – Health Post Nepal
२०७६ कार्तिक १० गते १३:४५
केही दिनअघि मात्र विश्व ओस्टियोपोरोसिस दिवस मनाइएको छ । प्रत्येक वर्ष २० अक्टोबरलाई विश्व ओस्टियोपोरोसिस दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ । यो विशेष दिन ओस्टियोपोरोसिस तथा मेटाबोलिक बोन डिजिजको रोकथाम, लक्षण, निदान तथा उपचारबारे वैश्विक जागरुकता जगाउने कामका लागि समर्पित छ । यो दिवसको आयोजना इन्टरनेसनल ओस्टियोपोरोसिस फाउन्डेसन (आइओएफ) ले गरेको हो ।
सामान्यतया स्वस्थ हड्डी मौरीको चाकाजस्तो देखिन्छन् । जब ओस्टियोपोरोसिस हुन्छ, हड्डीमा प्वाल तथा रिक्त स्थान स्वस्थ हड्डीको तुलनामा निकै ठूला बन्दछन् । ओस्टियोपोरोसिसको शाब्दिक अर्थ ‘छिद्रपूर्ण हड्डी’ हुन्छ । ओस्टियोपोरोटिक हड्डीले आफ्नो घनत्व वा द्रव्यमान गुमाउँछन् र असामान्य टिस्युहरूको संरचना बन्न पुग्छ । जति हड्डी कमजोर हुँदै जान्छन्, त्यति नै तिनीहरूको टुट्ने सम्भावना अधिक हुन्छ ।